गर्भावस्थामा हाडजोर्नीको समस्या: डाक्टर सँग ११ प्रश्न
काठमाडौं । गर्भावस्था हरेक महिलाको लागि एक विशेष अवस्था मानिन्छ । यो समयमा महिलालाई अरु बेला भन्दा बढी स्याहारको आवश्यकता पर्छ । गर्भ रहेदेखि महिलाको शरीरमा विभिन्न प्रतिक्रिया देखिन थाल्छ । हर्मोनको असन्तुलनले केहि समस्या पनि निम्त्याउँछ । सानो हेलचेक्रयाई बाट पनि आमा तथा शिशुको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने हुनाले गर्भवती अवस्थामा, स्वस्थ सन्तुलित खानाको सेवन, नियपिमत शारीरिक व्यायाम गर्नु पर्छ । परिवारहरुले उचित माया र स्नेह पनि दिन उतिकै जरुरी हुन्छ । त्यस्तै प्रायः गर्भवति महिलामा हाडजोर्नीको समस्या पनि देखिन्छ । यिनै समस्याहरुको सेरोफेरोमा रहेर महिलास्वास्थ संम्वादाता समृद्धा के.सी ले राष्ट्रीय ट्रमा सेन्टरका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डे सँग गरेको कुराकानीः
१.गर्भावस्थामा कस्तो कस्तो समस्या देखा पर्छन ?
गर्भावस्थामा हाडजोर्नी दुख्ने समस्या धेरैमा देखिन्छ तर हाम्रो समाजमा अहिले सम्म पनि यसको चेतना आइसकेको छैन । अझै पनि स्त्री तथा प्रसुती रोग बिशेषज्ञ कँहा गएर आफ्नो सबै समस्या जाँच गराउने प्रचलन कायमै छ । गर्भवती महिलाहरुमा एक चोटी हाडजोर्नी बिशेषज्ञलाई पनि देखाउनु पर्छ भन्ने चेतना आइसकेको छैन र स्त्री रोग बिशेषज्ञहरुले पनि हाडजोर्नी बिशेषज्ञ कँहा पठाउने गरेका छैनन् । बिरामीहरु आउछन् तर जति बिरामीहरु हामी कँहा आउछन् त्यो भन्दा धेरै बिरामी घरमै बस्छन् वा गलत उपचार गराएर बसिरहेका हुन्छन् ।
२.यस ट्रमा सेन्टरमा कस्ता समस्या लिएर गर्भवति महिलाहरु आइरहेका छन् ?
गर्भवस्थामा हाडजोर्नीको समस्या लिएर थोरै मात्रामा बिरामीहरु आइरहेका छन् । सबै भन्दा बढि ढाँड दुख्ने समस्या लिएर आएको पाईन्छ । हाम्रो समाजमा गर्भअवस्था हुदा ढाँड दुख्छ भन्ने एउटा मन्यता स्थापना भएको छ, जुन एकदमै गलत हो । गर्भअवस्थामा ढाँड दुख्नु सामान्य हो भन्ने मान्यताले गर्दा बिरामी त्यति आउने गरेका छैनन् ।
३.गर्भअवस्थामा ढाँड दुख्नुको कारण के हो ?
गर्भाअवस्थामा ढाँड दुख्नुको कारण गर्भाअवस्था आफै हो । गर्भावस्थामा गर्भवती महिलाको तौल बिस्तारै बढ्दै जान्छ त्यस पछि पाठेघर पनि ठूलो हुन्छ , साथै बच्चा पनि हप्ता, महिना गर्दै ठूलो हुन्छ । बच्चाको अवस्था परिर्वतन भइरहन्छ त्यस कारणले हिड्दा खेरी ढाँडले बडि वजन वेहोर्नु पर्छ । बच्चा कहिले कोल्टो कहिले सिदा हुन्छ र पाठेघरको आकार पनि ठूलो हुन्छ जस्का कारणले हिड्दा मांसपेशीको सन्तुलन मिल्दैन र मांसपेशीको सन्तुलन नमिल्नाले ढाँड दुख्न थाल्छ । गर्भावस्थामा निसक्ने रिल्याक्सिन भन्ने एक प्रकारको हर्मोनले कम्मर र ढाडका जोर्नीलाई लचकता दिन्छस यसले गर्दा पनि ढाड दुख्ने गर्छ।
४.गर्भावस्थाको कति महिना सम्म ढाँड दुख्ने समस्या देखापर्छ ?
गर्भवती भएको ६ महिना कटिसकेपछी धेरै ढाँड दुख्ने समस्या हुन्छ । गर्भवस्था भन्दा पहिलानै ढाँड दुख्ने समस्या भएको महिलाहरुलाई गर्भवस्थामा झन् धेरै ढाँड दुख्ने गर्छ । त्यस्तै पहिलै सुत्केरी भएका महिलाहरुमा पनि ढाँड दुख्ने समस्या भएको पाईन्छ र पेटमा जुम्ल्याहा बच्चा छ भने पनि यस्तो समस्या बढी हुन्छ ।
५. गर्भवस्थामा यसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ ?
गर्भवस्थामा ढाँड दुख्ने समस्यालाई प्राकृतिक रुपमा लिनु हुदैन। उपचार गर्न अलि गारो नै छ तर यसबाट बच्न भने सकिन्छ । समाजमा कस्तो चेतना आउनु पर्यो भने ढाँडको कसरत पहिलै देखि गर्नुपर्छ किनभने ढाँडको मांसपेशीलाई पहिलै देखि बलियो बनायो भने पछि गर्भवती अवस्थामा ढाँड दुख्ने समस्या कम हुन्छ ।
अनि सबै ढाँड दुखाई मांसपेशीको कारणले मात्र नभएर कहिलेकाही ढाँडको नसा च्यापेर पनि हुन्छ किनकि अत्यधिक वजन भएपछि ढाँडको हड्डीबाट डिक्स भन्ने प्रोल्याप्स हुन्छ जस्ले नसा पनि छुन्छ । जुनकुरा लक्षणबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । यदि ढाँड मात्र दुख्छ र अरु कतै सरेको छैन भने त्यो मांसपेशीको दुखाइ हो । यस्लाई एक्स रे पनि गरिदैन किनभने एक्स रे ले पेट भित्र भएको बच्चालाई असर पार्छ ।
गर्भवस्थामा नदुख्ने औषधि धेरै खानु हुदैन त्यस्तो बेला सिटामोल मात्र खाए हुन्छ । तर यदि दुखाई खुट्टा तिर पनि सरेको छ वा खुट्टामा झमझम भयो भने चाहिँ भने ढाँडमा नसा च्यापेको शंका गर्न सकिन्छ र यसलाई थाहा पाउनको लागि एम आर आइ पनि गरिन्छ । एक्स रे को तुलनामा एम आर आइले आजसम्म बच्चालाई कुनै पनि असर पुर्याको छैन ।
६.ढाँडको नसा च्यापे पछि के गर्न सकिन्छ ?
यदि एम आर आइ गर्दा नसा च्यापेको भेटिएको छ भने त्यसको चरणहरु हुन्छ । फिजियोथेरेपी, क्यालसियम मात्र दिएर निको हुन्छ भने त्यो दिन्छौँ र धेरै हिडडुल नगर्ने सल्लाह दिन्छौँ । यदि अप्रेशन गर्नु पर्ने छ भने बच्चा जन्मिए पछि गर्ने । त्यति समय सम्म कसरतबाट नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।
७.गर्भवस्थामा कस्तो कसरत गर्न सकिन्छ ?
मुख्यतया त सबै महिलाले गर्भवस्थामा कसरी सुत्ने भन्ने कुराको जानकारी राख्नुपर्छ । सुत्दा दुईवटै घुडाको मुनि तकिया राखेर सुत्ने जस्ले घुडालाई खुम्च्याउछ र ढाँडको मांसपेशीलाई खुकुलो बनाउछ जसले गर्दा ढाँड दुख्दैन। अर्को तरीका चाहि कुर्कुचा मुनि दुई वटा सिरानी राखेर २० मिनेट सम्म सुत्ने र यो दिनको ४ चोटी सम्म गर्नुपर्छ । यति गरि सकेपछि महिलामा हुने मांसपेशीको दुखाई धेरै हद सम्म कम हुन्छ ।
८.कसरत गर्दा गर्दै पनि ढाँड दुख्न कम नभए के गर्ने ?
यो अवस्थमा औषधी खाने , मालिस गर्ने र दुखाई अलि कम भए पछि भौतिक चिकित्सकको मै गएर डाक्टरको निगरानीमा मसिनहरु बाट मसाज गर्न सकिन्छ । यदि ढाँड एकदैम दुखेको छ भने एम।आर।आइ गर्नुपर्छ र नसा च्यापेको छ , खुट्टामा झम झम भएको छ , बच्चा पाउने बेला सम्म कुर्ने समय छैन , दिशा पिसाब पनि रोकिएको छ यस्तो केशमा गर्भअवस्थामा अप्रेशन पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
९.आमालाई यस्तो समस्या हुदा भेट भित्रको बच्चालाई कुनै असर हुन्छ कि हुदैन ?
आमालाई भएको यस्ता समस्याहरुले बच्चालाई कुनै असर पर्दैन तर यदि यस्तो बेला गर्भअवस्थामा खान नहुने औषधिहरु खाइयो भने बच्चालाई असर पर्छ नजानेर एक्स रे गरियो भने बच्चाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । गर्भअवस्थाको समयमा केहि उपचार गर्न अस्पताल गइयो भने म गर्भवती छु भनेर डाक्टरलाई भन्नु पर्छ जस्ले गर्दा गलत औषधि खानबाट जोगिइन्छ ।
१०.यी बाहेक कस्ता कस्ता समस्या गर्भवस्थामा देखा पर्छन ?
ढाँड दुख्ने बाहेक अर्को प्रमुख समस्या भनेको हिपको अस्थायी प्रकृतिको हड्डी मक्किने यो रोगलाई हामी ट्रान्जिएन्ट ओस्टेओपोरोसिअ ओफ हिप भन्छौँ । गर्भवस्थामा हर्मोनको गडबडीले गर्दा हिपको हड्डीमा जाने रगत आपूर्ति कम हुन्छ जसकारण हिपको हड्डी मक्किन्छ ।
अर्को समस्या भनेको हातको नाडि झम्झमाउने जस्लाई कार्पल टनेल सिन्ड्रोम भनिन्छ । गर्भवस्थामा शरीर सुन्निने भएका कारणले नसा च्यापिन्छ र हातको औँलाहरु झम्झमाउनुका साथै नाडि पनि दुख्ने गर्दछ । यस्तो समस्या देखियो भने चिकित्सकिय सल्लाहमा विशेष खालको पट्टि लगाउने र औषधिहरु खानु पर्छ ।
साथै अर्को समस्या भनेको गर्भवती भएपछि पाठेघर ठूलो हुदै जान्छ जसको कारण तिग्रा दुख्ने , कम्मरको नसा च्यापिने , तिग्रा झम्झमाउने,कुरकुर्चा पोल्ने हुन्छ ।
११.अन्तमाः माथि उल्लेख गरिएका समस्या नदेखियोस भनेर के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
सम्पुर्ण विवाहित र अविवाहित महिलाहरुले कसरत गर्ने बानि बसाल्नु पर्छ जुन हाम्रो गाँउ ठाँउमा चलन छैन । यूटुयूबमा विभिन्न कसरतहरु हेरेर सिक्न सकिन्छ र ढाँडको कसरत पहिलै देखि गर्ने गर्यो भने गर्भवस्थामा ढाँड दुख्न एकदमै कम हुन्छ ।
महिला स्वास्थ्य संम्वाददाता